Ogaden News Agency (ONA) – Qodobo Muhiim ah oo Maalintii 2aad ee Siminaarka Horyaala – Sawiro dheeraad ah
Qodobo Muhiim ah oo Maalintii 2aad ee Siminaarka Horyaala – Sawiro dheeraad ah
Posted by ONA Admin	/ April 12, 2014
Siminaarkii iyo Aqoon Iswaydaarsigii Hawlwadeenka iyo Masuuliinta Jaaliyaadka Yurub oo maalintiisii labaad galay. Siminaarkan oo shalay kafurmay magaalada Frankfurt ee dalka Germany ayaa lagu wadaa in bari oo Axad ah lasoo gabagabeeyo haduu eebuhu yiraahdo. Waxaa maanta siqotodheer leh loogu soo bandhigay barnaamij iyo qodobo gundhig u ah horumarinta iyo xoojinta Halganka shacabka Somalida Ogadenya.
Ka qayb-galeyaasha siminaarka ayaa maanta waxaa horyaala qodobo aad muhiim u ah qadiyada Ogadenya iyo guud ahaan geedi socodka Halganka ay JWXO hormuudka katahay. Cashiradii iyo doodihii shalay ayaa dhamaantood ahaa kuwo aad ahmiyad iyo mudnaan gaar ah xanbaarsanaa.
Barnaamijtii maanta aadka uxiisa badnaa ee lasoo bandhigay ayaa waxaa kamid ahaa warbixino ku soobsan xaalada Gumaysiga. Waxay ka qaybgaleyaashu aad ooga doodeen si hufana looqaadaa dhigay marxalada nidaamka Wayaanuhu hormuudka uyahay ee kataliya Itoobiya. Sidoo kale waxaa lasoo bandhigay saadaasha mustaqbalka jiritaanka EPRDF/TPLF.
Waxaa kaloo kamid ahaa cashiradii maanta lagu soobandhigay siminaarka iyo aqoon iswaydaarsiga Hawlwadeenka Qaarada Yurub. Cashir aad uqiimo badan oo kusaabsan kahortaga iyo fashilinta borobagaandaha raqiiska ah ee Gumaysiga. Taasoo wajiyo badan leh isla markaana loodoonayo in lagu shakigaliyo bulshada Somalida Ogadenya. Barnaamijkan yaa sihufan loogu soobandhigay xeeladaha iyo wajiyada guracan ee Gumaysiga iyo Gumaysi Kalkaalku uu faafinayo.
Dhanka kale waxaa barnaamijka maanta si cilmiyaysan loogu qaadaa dhigay barnaamijka guud ee siyaasada JWXO. Barnaamijkan oo aha amid aad loogu baahnaa ayaa shaaca looga qaaday istiraatiijiyada Halganka.
Barnaamijka maalinta 2aad ee siminaarka aqoon iswaydaarsiga Hawlwadeenka qaarada Yurub yaa kusoo dhamaaday jawi farxad iyo raynrayn leh. Waxaana la,isku balansaday in siwanaagsan looga yool gaadhi doono qorshaha maalinta 3aad haduu eebuhu yiraahdo.